अवसर पाउदा बस्ने नत्र भाग्नेहरूले हामीलाई असर गर्दैनन् « Anumodan National Daily
अवसर पाउदा बस्ने नत्र भाग्नेहरूले हामीलाई असर गर्दैनन्
प्रकाशित मिति : 1 December, 2017
अनेरास्ववियू र युवासंघमा लामो समय केन्दीय तहमा काम गरिसकेका ४३ वर्षिय झपट रावल नेकपा (एमाले) का वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँलाई एमालेले कैलाली इञ्चार्जको जिम्मेवारी पनि दिएको छ । आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीगत जीवनमा अनेकौं आरोह अवरोह व्यहोरेका रावल यसपटक कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ कैलालीमा एमालेको सबैभन्दा बलियो क्षेत्रका रूपमा रहेको क्षेत्र नम्बर २ को अहिलेको अवस्था लगायतका चुनावी विषयमा नेता रावलसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
प्रतिनीधिसभा सदस्यका उम्मेदवार कैलाली क्षेत्र नम्वर २
– चुनाव नजिकिदै छ मतदाताले तपाईको उम्मेदवारीलाई कसरी लिएका छन् ?
यतिबेला कैलालीको क्षेत्र नम्बर २ का जनता संयुक्त बाम गठबन्धनलाई जिताउनुका लागि आतुर हुनुहुन्छ । चुनाव जति नजिक आउँदैछ त्यति नै का“ग्रेस पार्टी परित्याग गरेर बाम गठबन्धमा प्रवेश गर्नेको ओइरो लागिरहेको छ । यसले पनि हामीप्रति जनताको विश्वास छ भने र देखाउँछ । हामीले घरदैलो गरिरहँदा पनि जनता निक्कै सकारात्मक भएको पाएका छौं । यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ ।
– तपाईका चुनावी एजेण्डाहरू के के छन् ?
मुख्यतः जुन अहिलेको सरकार छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने हो । अर्काे नेपालको संविधानको छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्ने हो । संक्रमकाल अन्त्य गरेर राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने हो । राजनीतिक स्थिरताको माध्यमबाट राष्ट्रलाई समृद्धिको दिसातिर लैजानुपर्छ । यहाँ स्थानीय तहमा बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारी, खानेपानी जस्ता समस्याहरू छन् । यस्तै कैलालीमा घर छ जग्गा छ तर जनताको नाममा लालपुर्जा छैन । यहाँ जब वर्षा लाग्छ अनि डुवान हुन्छ, भात खाने जमिन बगाइरहेको छ, तटबन्धन नहुँदा बाढीले नोक्सानी गरिरहेको छ । यस्ता धेरै समस्या छन्, मैले यी समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता गरिरहेको छु ।
– तपाईले उठाएको एजेण्डा जनताले कतिको मन पराएका छन् त ?
जनताले एजेण्डा मन पराएकोले नै अहिले पार्टी प्रवेशको लहर आएको हो । हामीलाई जनताले विश्वास गरेका छन् । जनता संयुक्त बाम गठबन्धको पक्षमा छन् ।
– बाम एकता त भएको छ, तर तपाईकै पार्टीका पुर्व सांसदहरू मोहनसिंह राठौर र रबिना चौधरीले पार्टी परित्याग गरेका छन्, त्यसले कत्तिको गाह्रो भएको छ ?
त्यो त स्वभाविक ढंगले अवसरवादीहरूको आउने जाने क्रम भइरहेन्छ । उनीहरू एउटा सामन्त, जमिन्दार हुन, उनीहरू कम्युनिष्ट होइनन् । उनीहरू समाज रूपान्तरणका लागि आएका होइनन् । उनीहरू केही पदका लागि, केही स्वार्थका लागि, मानसम्मानका लागि आएका थिए, सामान्तहरू पद पाउनका लागि आउँछन्, जतिबेलासम्म पाए बसे नपाएपछि काँग्रेसमा गए । काँग्रेसमा अवसर नपाउ“दा फेरि उनीहरू त्यसलाई पनि छोड्ने छन् । यसले हामीलाई कुनै पनि असर गरेको छैन । काँग्रेसले आफ्नो पुरानो कार्यकर्तालाई टिकट दिएको भए हामीलाई जित्न गाह्रो हुन्थ्यो । जसले जनताको काम गरेन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा फर्किएन त्यो काँग्रेस जाँदा हामीलाई केही असर परेको छैन । एमालेले अनुशासनको कारवाही गरिसकेकोलाई काँग्रेसले उम्मेदवार बनाएकोले पनि मलाई चुनाव जित्न राहत भएको छ ।
– चुनाव जित्नका लागि उम्मेदवारहरू धेरै खर्च गरिरहेका छन्, तपाईले के गरिरहनु भएको छ ?
म चुनावमा खर्च गर्ने र जनतालाई प्रभावमा पर्ने पक्षमा छैन । म जनतालाई भोट दिनुस्, म तपाईलार्ई विकास दिन्छु भनेको छु । तपाईहरू मलाई माया गर्नुस्, म तपाईको मायालाई सम्मान गर्छु, म तपाईको सेवाक हुँ, मालिक होइन भनेर जनता सामु गइरहेको छ । परिवर्तन सम्भव छ र त्यो परिवर्तन युवाबाट मात्रै सम्भव छ भनेको छु । जनतालाई प्रभावित पार्न पैखा खर्च गर्ने पक्षमा म छैन । । यो प्रवृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छको अभियन्ता पनि म बन्न चाहन्छु ।
– तपाई आफू जित्छु भन्ने कुरामा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
म जित्छु होइन्, म जितिसके । म मात्रै होइन मसँगै रहनु भएका प्रदेश १ का रतन थापा र प्रदेश २ बाट नन्दबहादुर साउ“द (राजेन्द्र) पनि जितिसक्नुभयो । प्रदेश १ मा मतदाता सूचीमा नामावली नभएकोलाई काँग्रेसले उम्मेदवार बनाइरहेको छ । प्रदेश २ पनि नामावली नभएकोलाई काँग्रेसले उम्मेदवार बनाएको छ र माथि प्रतिनिधिसभा पनि एमालेबाट भागेको भगौडालाई उम्मेदवार बनाएको छ । यसले पनि हामी जितिसकेको देखाउँछ ।
– अन्त्यमा मतदातालाई केही भन्नु छ कि ?
अन्त्यमा म क्षेत्र नम्बर २ बासी दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई जो अन्याय, अत्याचार, शोषणको जालोमा पिल्सिनु भएको छ, तपाईहरू सबै कुनै पनि प्रभावमा नपरेर प्रलोभनमा नपरेर, परिवर्तन गर्नका लागि, स्वतन्त्र र स्वाधिन मुलुक बनाउन, बाह्य हस्तक्षेप अन्त्य गर्नका लागि बाम गठबन्धलाई जिताउन हुन अनुरोध छ । २०४८ सालदेखि चुनाव लडिरहेका तर काम नगरेकालाई होइन्, हामी जिताउनु अनुरोध छ ।